Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waxtar leh in aad arsenal si loo helo muuqaal wanaagsan ee aad videos waa awood u leeyahay inuu iyaga noola, si meesha looga saaro Ngcuka oo diiradda xaq u gal mawduuca aad rabto. Nasiib darro, ma jiraan qalab abuurka oo online in si toos ah noola video, ay inta badan waxaa loogu talagalay in ay siii halkii sawiro. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro fara badan oo online video tifaftirayaasha in aad ha video dalagga, si aynu isla eegno qaar ka mid ah kuwa ugu fiican halkaas. Fiiri sida ay u noola video ah on Mac iyo Windows halkan.
Part One - Top 5 Best Online Croppers
Part Two - Sida loo Dallaga Video Online ah
Part One - Top 5 Croppers Best Online
1. Video qalabeed
Tani waa editor ah oo gebi ahaanba bilaash ah ka duwan qaar ka mid ah in ay leeyihiin doorasho xaddidan oo lacag la'aan ah. Interface ayaa ka badan wax yar ka adeegayaa badan yahay, si kastaba ha ahaatee shaqeynta yahay oo dhan waxaa, oo aad si fudud ku noola, jar jaray oo aad video, iyo sidoo kale ku darto saamaynta iyo qabsato audio ah, ama xitaa bedelo wadada audio oo gebi ahaanba. Software wuxuu u shaqeeyaa si aad u fudud, laakiin waxay bixisaa wax soo saarka wanaagsan iyo aalada sahlan, waxa uu leeyahay xad file ah 600Mb ah, laakiin haddii kale ma laha xayiraad loogu isticmaalo lacag la'aan ah oo wakiil ka editor weyn qof kasta.
Goobta A fudud oo aan sharraxaad ka oo dhan, laakiin waxa ay si deg deg ah ku egyahay oo uu leeyahay xoolo ah oo ka shaqeynayaan, si fursad weyn.
Kanu waa xirmo yar oo kooban oo kaliya diiradda ku oggolaanayo in aad xaalkaa aad videos, isagoo intaa ku daray track music ah, lana siii iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale saamaynta gaar ah. Waxay bixisaa interface fiican oo nadiif ah oo bixiya tafatirka degdeg ah, iyadoo tiro balaadhan oo ah awoodaha samayn kartaa wax ka badan ama ka yar inaad u baahan tahay. Abuurka waa mid fudud sida xulashada qalabka ka menu, si sahal ah loo isticmaalo halkan waa heer sare ah. Filelab falaa u baahan tahay waqti dheeraad ah si aad u browser, ka duwan kuwa kale, laakiin waxa aanu si fiican u shaqeeyo oo waa laga yaabaa in sababta interface waa ka sii yar oo la safeeyey in waadixa ah ee tifaftirayaasha browser, ay taageerto kala duwan ee qaabab file iyo soo bandhigayaa xirmo weyn in uu yahay ku haboon dadka cusub iyo kuwa raadinaya ah gacanta ku yar in ay tafatir.
A editor fiican online arrintaasna waa u fududahay in la isticmaalo, la aalada fudud, xirmo aad u wanaagsan.
3. kaalinta labaad
Loopster ka hawl online iyo via barnaamijyadooda, laakiin software-ka online waa kuwa ugu dhamaystiran. Waxaad noola, edit audio, gooyaa oo jar videos iyo sidoo kale dar saamaynta iyo kala guurka, haddii aad rabto. Isticmaalka aasaasiga ah waa lacag la'aan, oo ay bixisaa 3GB ee kaydinta daruur, ugu badnaan xal 480p iyo files ma ka badan 1GB, oo ay la socdaan wax soo saarka la watermarked sida 'Loopster'. Dhammaan xayiraadahaas waa la beddeli karaa iyadoo maciin bidi qorshaha bixiyo, kaas oo ay leeyihiin watermark lahayn, oo ay la yimaadaan kaydinta dheeraad ah, hufnaan sare iyo tirada file weyn, iyadoo ku xiran inta aad bixiso. Inkasta oo online, waxa aanu u eg qaar ka mid ah feature more hodan video ganacsi tifaftirayaasha halkaas, taas oo ay tahay in la ammaanay, waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah waafaqsan file oo waa qalab oo dhan sahlan in la fahmo, oo leh caawimo nidaamka wanaagsan si aad u hesho ilaa iyo socda sida ugu fiican ee ay u isticmaalaan qalab kasta iyo waxa ay qabato.
Goobta A weyn oo leh waxyaabo aad u fiican, oo fursad u lacag la'aan ah ugu dhergin doonaa.
Interface A smart halkan oo ay la socdaan qaab binta biloway, users free at Shotclip heli 5GB ee lagu kaydiyo, xannibaad 480p ah oo ku saabsan xallinta iyo 15-daqiiqo ee dhoofinta movie bishiiba, taas oo watermarked la logo Shotclip ah. Bixi lacag bil kasta oo la kordhiyo kaydinta iyo xal la heli karo, oo ay la socdaan sida badan video dhoofin karo. Waxaa jira watermark ma codsatay in ay wax soo saarka, waayo, mid ka bixisay qorshaha. Abuurka halkan qaliin fudud oo waxaa jira noocyo kala duwan oo qalab kale oo la heli karo goynta iyo falinjeeerka sidoo kale ku daray saamaynta iyo ku daray ama la beddelo kuwan raadkaygay audio. Interface waa wax fiican oo nadiif ah, iyo software ku daboolaa tiro balaadhan oo ah qaabab video, waxa ay si fiican u maamushaa oo soo saartaa natiijada si deg deg ah hadba tafatirka qalab aad isticmaalayso, aalada ay tahay mid fudud iyo dukumentiyada Waa sahlan tahay in la fahmo si qof awood u yeelan doonaan in ay helaan saamaynta ay doonayaan ka xirmo taas si dhakhso ah, waa mid aad u user saaxiibtinimo oo ku habboon tahay kuwa ku cusub tahay noocan oo kale ah video khalkhalgelinta.
Wixii dadaal tijaabo ah ama mid off daro audio adeegga lacag la'aan ah u noqon doonaa ganaax dadka intooda badan, oo soo bandhigaysaa mid ka mid ah halkan interfaces user ugu fiican.
Tani waxay la mid Xaamid waa editor sawir laakiin qarsoon gudahood waa awood u leh inay noola aad videos, waxa ay markaas u badan aasaasiga ah amarkooda aan badnayn badan halkan oo ku haboon oo kaliya clips aad u gaaban, laakiin waxa aanu si dhakhso ah u shaqeeyaan oo ay jiraan sharraxaad yar in lagu daro wareer. Interface waxaa ka maqan wax yar, oo waxaa la nooc ka mid ah ka tagay si aad u ogaado wax adiga kuu gaar ah, laakiin waxa aanu soo saari natiijooyin fiican gudahood file size xadka iyo bixisaa boosteejo ah oo wanaagsan u videos yar haddii aad horey u yaqaanaan sida online video tafatirka ka shaqeeya. Wixii bilowga ah tani waa ma laga yaabaa in wadada ugu fiican in la qaato, iyadoo goobaha kale ah inta badan ka sahlan halkan bixiya si ay u fahmaan in ay hordhac video tafatirka kuwa ku cusub tahay fikradda.
Aad aasaasiga ah, oo inta badan si ka fiican iyadoo mid ka mid ah lagu badalan karo, laakiin waxa uu helo shaqo u samaysay hase ahaatee.
Wixii bandhig waxaan la isticmaalayo Video qalabeed, laakiin geedi socodku waa isku mid hadba kii aad doorato, waxaa aad u sahlan, oo aan ku bilowdo video laftiisa.
1. geliyaan Video ah
Tani waxay si fudud waa su'aal ah gujinaya 'dooran file ah' in la furo browser file ah oo aad computer iyo dedeg video saxda ah oo guji Upload, ama in ay doortaan video ah in mar hore waa online, nooca ay URL iyo download it Tifaftiraha . Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qabto video in Tifaftiraha.
2. Dooro qalab sax ah
Qaybta xigta waa in ay doortaan qalabka aad u baahan tahay, haddii ay taasi waxa aanu si lana siii la video saxda ah loo doortay (qaar ka mid ah u ogolaadaan in ka badan hal in la uploaded waqti a) dooro qalab dalagga.
Tani waa howl fudud, editor aad soo bandhigaysaa aad sanduuqa graphic ay yaryihiin in aad u guurto karo, stretch iyo heshiis ilaa aad dalagga saxda ah aad rabto. Sida aad ku arki kartaa in image hoose, meel aan hayo waa cad yahay, qaybaha madow yihiin wax kasta oo aan is takhaluso. Waxaad dooran kartaa inaad ku sii ratio gaar ah arrin u dalagga (weyn oo lagu hubinaayo in ay u HWBush oo dhan ku haboon galay TV aad wax xunna marka aad u ciyaaro) ama u oggolaadaan dalagga a freeform in ay noqon kartaa Qaab kasta aad rabto. Marka tani dalagga waa in ay diiradda saaraan, aboor.
Riixaya badhanka 'Dalag' ka dibna gooyo dhammaan gobollada madow aad ka tago kaliya meesha aad rabto. Haddaba waxaad kala soo bixi kartaa video ah ay yaryihiin oo ciyaaro.
Sida aynu ka arki kartaa, abuurka oo si fudud lagu sameeyey qalabka saxda ah online. Waa bilaash in la isticmaalo, fududahay in la shaqeeyaan oo waxay bixisaa wax soo saarka oo tayo fiican leh. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah barnaamijyada ay fududahay in la isticmaalo video tafatirka offline, qaado Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) tixgeliyaan. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Online Tools abuurka: Sida loo Dallaga Video Online ah